Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ "ART bee HIVE" vol.6 + bee! | Ota Ward Cultural Promotion Association
E bipụtara 2021/4/1
vol.6 Mmiri mbipụta
Feature isiokwu: Denenchofu, obodo nke Eiichi Shibusawa rọrọ banyere + bee!
Ebe ọ bụ na e mebeghị ya, ị nwere ike ịhapụ nrọ gị.
"Maazị Takahisa Tsukiji, onye nlekọta Ota Ward Folk Museum"
Denenchofu na obodo obibi nke klaasị na Japan, mana ọ bụbu mpaghara ime obodo a na-akpọ Uenumabe na Shimonumabe.Ọ bụ site na nrọ nke nwoke na ụdị mpaghara ahụ amaliteghachiri.Aha nwoke ahụ bụ Eiichi Shibusawa.N'oge a, anyị jụrụ Maazị Takahisa Tsukiji, onye na-elekọta Ota Ward Folk Museum maka ọmụmụ Denenchofu.
Kedu ụdị ebe Denenchofu dị n'oge gara aga?
"N'oge Edo, obodo bụ obodo dị mkpa nke ọha mmadụ. Ọnọdụ obodo nta Uenumabe na Shimonumabe Village bụ nke a na-akpọ oke Denenchofu. Denenchofu 1-chome, 2-chome, na radieshon ugbu a Shimonumabe dị na 3-chome , Site na mmalite nke oge Meiji, ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ dị 882. Ọnụ ọgụgụ ezinụlọ dị 164. Mana, e mepụtara ọka na ụdị ọka dị iche iche, na osikapa na -emepụta n'ebe dị ala, mana ọ dị ka oke nke Ugbo paddy pere mpe na mpaghara a, ọkachasị maka ọrụ ugbo na ugwu. "
Denenchofu tupu mmepe Nye: Tokyu Corporation
Gịnị gbanwere obodo nta ndị a ...
"Abụ m Eiichi Shibusawa *, nna nke ndị isi obodo Japan. Na mbido oge Taisho, echere m na Japan bụ ogige mbụ na-arụ ọrụ nke ọma nwere akụrụngwa obibi zuru oke ma jupụta n'okike.
Kemgbe Meiji Mweghachi, Japan ga-akwalite mmepụta ihe ngwa ngwa n'okpuru iwu nke ndị agha bara ọgaranya.N'ihi agha Russo-Japanese na Agha Iwa Mbụ, ụlọ ọrụ na-eme nke ọma n'obodo mbụ nke Tokyo (ihe dị n'ime Usoro Yamanote yana Osimiri Sumida).Mgbe ahụ, ọnụọgụ ndị na-arụ ebe ahụ ga-arị elu n'esepụghị aka.Orieslọ ọrụ na ụlọ dị iche iche.Dị ka o kwesịrị ịdị, ọnọdụ ịdị ọcha na-akawanye njọ.Ọ nwere ike ịdị mma ịrụ ọrụ, mana ibi ndụ siri ike. "
Shibusawa bụ onye kachasị mkpa na ego na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mana gịnị kpatara i ji tinye aka na mmepe obodo?
"Shibusawa agaala mba ọzọ kemgbe ngwụcha nke Tokugawa shogunate. Might nwere ike ị hụ obodo ọzọ ma nwee mmetụta dị iche na Japan.
Shibusawa lara ezumike nká na 1916 (Taisho 5).Ọ bụ afọ gara aga na amalitere m itinye aka na mmepe nke obodo ogige, na oge anaghị agabiga.La ezumike nká n'ọrụ gị pụtara na a gaghịzi eke gị n'agbụ nke azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ.A na-ekwu na ọ bụ ihe ziri ezi ịmepụta obodo na-enweghị uru na-anaghị ebute ụzọ naanị mmetụta akụ na ụba, ma ọ bụ na ezumike nka site na ọrụ ọrụ bụ otu n'ime ihe ndị na-akpata. "
Kedu ihe kpatara Denenchofu ji họrọ ebe mmepe?
"Na 1915 (Taisho 4), Yaemon Hata, onye bụ odeakwụkwọ nke Yukio Ozaki, onye jere ozi dị ka onye isi obodo Tokyo na Mịnịsta nke Ikpe Ziri Ezi, gara ndị ọrụ afọ ofufo dị na Shibusawa wee rịọ maka mmepe. Ọ bụ tupu. N'ihi arịrịọ ahụ , agbanwuru mgba ọkụ na Shibusawa, nke marala nsogbu a ogologo oge. Amaara m nke ọma banyere mmekọahụ. Rural City Co., Ltd. bụ nke e guzobere na 1918 (Taisho 7). "
Ọdụ Den Denchofu na mbido mmepe nke: Tokyu Corporation
Kedu ihe bụ echiche mmepe?
"Ọ bụ mmepe dị ka ebe obibi. Ọ bụ ime obodo bi n'ime ime obodo. Ọ bụ ime ime obodo nke nwere obere mmepe, yabụ ị nwere ike ịmata nrọ gị kpamkpam.
Nke mbụ, ala ahụ dị elu.Etinyela gị nsogbu.Na ọkụ eletrik, gas, na mmiri na-aga.Ezigbo njem.Ihe ndị a bụ isi mgbe ị na-ere ụlọ n'oge ahụ. "
Hideo Shibusawa, nwa Eiichi Shibusawa, ga-abụ isi mmadụ na mmepe n'ezie.
"Eiichi Shibusawa malitere ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na-achịkwa Hideo nwa ya.
Eiichi na-adọta ndị enyi dị iche iche site na ụwa azụmahịa ka ha guzobe ụlọ ọrụ, mana ha niile bụ ndị isi ala n'otu ebe, yabụ ha anaghị etinye aka na azụmaahịa ahụ oge niile.Ya mere, iji tinye uche na mmepe obodo ubi, agbakwunyere nwa m nwoke bụ Hideo. "
Hideo gara mba ọdịda anyanwụ tupu mmepe ahụ.
"Ahụrụ m St. Francis Wood, bụ ime obodo dị na mpụga San Francisco." Denenchofu "dị ka obodo a. N'ọnụ ụzọ nke obodo ahụ, dị ka ọnụ ụzọ ámá ma ọ bụ ihe ncheta. Enwere ụlọ ọrụ ọdụ na mpaghara ahụ, yana A na-ahazi ụzọ ndị a n'usoro na-eme ka ọ dị na ọdụ. Nke a makwaara na Paris na France, a na-ekwukwa na ụlọ ọdụ ahụ na-arụ ọrụ dị ka ụzọ nloghachi mmeri. Isi iyi nke ugbu a bụ nke na-agbanwe agbanwe site na mmalite nke mmepe .
E wuru ụlọ ndị ọdịda anyanwụ ka ọ dịkwa na mbara obodo ndị ọzọ.Agbanyeghị, ọbụlagodi na mputa ahụ bụ nke ndị Western, mgbe ị banyere n'ime ya, ọ dị ka enwere ọtụtụ ụdị Japanese-Western, dị ka tatami mats, ebe ezinụlọ nọ n'azụ na-eri osikapa n'oge ime ụlọ ịke Western.E nweghi otutu uzo ndi Western.Nke ahụ abụghị ikpe maka ụdị ndụ ndị Japan. "
Kedu maka obosara okporo ụzọ?
"Obosara nke okporo ụzọ bụ 13 mita. Echeghị m na ọ bụ ihe ijuanya ugbu a, mana ọ sara mbara nke ukwuu n'oge ahụ. Osisi ndị dị n'akụkụ ụzọ bụkwa ndị na-eme oge. O yiri ka osisi ndị ahụ nwere agba na dum 3-chome Ọ dị ka ginkgo akwukwo.Ọzọkwa, ọnụọgụ nke okporo ụzọ, ebe ndụ akwụkwọ ndụ na ogige bụ 18% nke ala ebe obibi. Nke a dị ezigbo elu. Ọbụna n'etiti etiti Tokyo n'oge ahụ, ọ bụ ihe dịka 10 N'ihi na ọ bụ ihe dịka%. "
Banyere mmiri na nsị, ọ dị elu n'oge ahụ na m maara nke ọma nsị.
"Echere m na nke ahụ ziri ezi. N'oge na-adịghị anya Ota Ward n'onwe ya nwere ike idebe usoro nsị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'oge gara aga, a na-asachapụ mmiri mmiri nke ụlọ n'ime mmiri ochie nke Rokugo Aqueduct. E mepụtara netwọkụ a na-akpọ nsị. Ọ bụ emesia, echere m na obu ihe ndi 40. "
Ọ bụ ihe ịtụnanya na enwere ogige na ogige tenis dị ka akụkụ nke mmepe obodo.
"Horai Park na Denen Tennis Club (emesia Denen Coliseum). Horai Park hapụrụ ebe ahụ bụbu ime obodo n'ụdị ogige. .Dị ọhịa a dị iche na mpaghara Denenchofu dum, mana mmepe obodo Mgbe ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụ akpọrọ obodo ime obodo, foduru nke Musashino izizi lara. Ọ bụ ya mere Denen Coliseum ji meghee ebe ahụ bụ ama egwuregwu baseball dị ka ama egwuregwu bọọlụ Denen Tenis. "
Echiche kachasị elu nke ebe obibi Tamagawadai Nke enyere: Ota Ward Folk Museum
Ọ bụ obodo ebe nrọ rọrọ.
"Na 1923 (Taisho 12), Nnukwu Ala ọma jijiji ahụ mere ma bibie etiti obodo ahụ.Lọ ndị ahụ jupụtara na ọkụ ahụ gbasaa ma kpatara nnukwu mbibi.Lọ ndị jupụtara na ihe mkpofu dị ize ndụ, ya mere ala ahụ kwụsiri ike n'ebe ndị dị elu, ume nke ibi na mbara ala sara mbara.Nke ahụ ga-abụ ọdụ, Denenchofu ga-amụba ọnụ ọgụgụ ndị bi n'otu oge.N'otu afọ ahụ, ụlọ ọrụ "Chofu" meghere, na 1926 (Taisho 15), aha ya bụ "Denenchofu", a mụrụ Denenchofu na aha na eziokwu. "
Onye nlekọta nke Ota Ward Folk Museum.
N’ebe ngosi ihe mgbe ochie ahụ, ọ bụ ya na-ahụ maka nyocha, nyocha, na ọrụ ngosi metụtara ihe ndị mere n’akụkọ ihe mere eme n’ozuzu ha, ọ na-agba mbọ kwa ụbọchị ịkọwara ndị obodo ahụ akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ. Pụtara na mmemme NHK na-ewu ewu "Bura Tamori".
Wepu ya "Aobuchi Memoir" nke Eiichi Shibusawa
"Ndụ obodo a enweghi ihe okike. Ọzọkwa, ka obodo na-abawanye, ihe okike na-efu na ndụ mmadụ. N'ihi ya, ọ bụghị naanị na ọ nwere mmetụta na-adịghị mma na omume, kamakwa n'ụzọ anụ ahụ. Mmetụta na ahụ ike, na-emebi ọrụ, atrophy nke uche, ma na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrịa nwere adịghị ike ncheta.
Ndi mmadu apughi ibi ndu n’enweghi okike. (Omitted) Ya mere, "Garden City" na-emepe emepe na Britain na United States ihe dị ka afọ 20.N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ogige ogige a bụ obodo na-etinye okike, ọ bụkwa obodo nwere ọgaranya ime obodo nke yiri ka ọ ga-abụ nkwekọrịta n'etiti ime obodo na obodo ahụ.
Ọbụna dịka m na-ahụ Tokyo ka ọ na-agbasa na nnukwu ije, Achọrọ m ịmepụta ihe dịka obodo ogige na mba anyị iji mejupụta ụfọdụ mmejọ na ndụ obodo mepere emepe. ".
"Pamphlet Information City" n'oge ere
N'ime obodo ubi anyị, anyị ga-elekwasị anya na mpaghara ndị nwere ọgụgụ isi na-aga n'otu nnukwu ụlọ ọrụ akpọrọ Tokyo City.N'ihi ya, anyị na-achọ iji wuo ebe obibi ọhụrụ mara mma na ala ịta ahịhịa nke nwere oke ibi ndụ.
Obodo ubi ndị dị na Japan bụ naanị iwu ụlọ, ọ bụrụhaala na ime obodo gbara gburugburu, mpaghara ebe e wuru ụlọ ga-agbaso ihe ndị a chọrọ.
(XNUMX) Ime ala akọrọ na ikuku nke ikuku.
(XNUMX) Geology kwesịrị ịdị mma ma nwekwa ọtụtụ osisi.
Area Mpaghara kwesịrị ịdịkarịa ala 10 tsubo (ihe dị ka square mita 33).
Nwee njem njem nke ga-enyere gi aka iru n’ime obodo n’ime otu awa.
Mezue telegraph, ekwentị, oriọna, gas, mmiri, wdg.
⑥ Enwere ụlọ ọrụ dị ka ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, na klọb.
Nwee ụlọ ọrụ mmekọrịta dịka ndị na-azụ ahịa.
Hideo Shibusawa bụ isi atụmatụ
Stationlọ ọrụ ihe atụ
Concentric okirikiri radieshon atụmatụ
Obosara ụzọ (okporo osisi okporo ụzọ 13m, opekempe 4m)
Osisi n'akụkụ uzo
18% nke okporo ụzọ, oghere ndụ, na ogige ntụrụndụ
Ntinye mmiri na nsị
① Wula ụlọ ndị nwere ike inye ndị ọzọ nsogbu.
(XNUMX) Ọ bụrụ na a ga-enye ihe mgbochi, ọ ga-adị mma ma maa mma.
Lọ ahụ ga-anọ n’elu ala nke XNUMX ma ọ bụ ala.
Site Ebe a ga-ewu ulo ga-adi n’ime XNUMX% nke ala obibi.
⑤ Ebe dị anya n’etiti okporo ụzọ na okporo ụzọ ga-abụ ọkara ụzọ n’obosara.
Ego ụlọ a ga-akwụ ga-abụ 120 yen ma ọ bụ karịa kwa tsubo.
Lọ ahịa ga-adịkarị nso ọdụ ọdụ ahụ iche na ebe obibi.
⑧ Nguzobe ogige ntụrụndụ, ogige ntụrụndụ na klọb.
Site na Eiichi Shibusawa: Edegharịrị na webụsaịtị National Diet Library
Amuru na 1840 (Tenpo 11) rue ulo ugbo ugbua na Chiaraijima, Fukaya City, Saitama Prefecture.Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ghọrọ onye isi nke ezinụlọ Hitotsubashi wee gaa Europe dị ka onye so na ndị njem na Paris Expo.Mgbe ọ laghachiri Japan, a gwara ya ka o jee ozi n'ọchịchị Meiji. N’afọ 1873 (Meiji 6), ọ gbara arụkwaghịm na gọọmentị ma tụgharịa na azụmahịa ụwa.Soro na nhazi na njikwa nke ihe karịrị ụlọ ọrụ 500 na òtù akụ na ụba dịka Daiichi National Bank, Tokyo Stock Exchange, na Tokyo Gas, ma tinye aka na ihe karịrị ọrụ mmekọrịta mmadụ na 600. Na-akwado "ụkpụrụ ịdị n'otu omume akụ na ụba".Isi ọrụ "Theory and Arithmetic".
Ihe owuwu na-asọpụrụ ihe okike
Kengo Kuma, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke na-etinye aka na imepụta ọtụtụ ụlọ na ụlọ na mba ofesi, dịka National Stadium, JR Takanawa Gateway Station, Dallas Rolex Tower na United States, Victoria & Albert Museum Dundee Annex na Scotland, na Odung Pazar Lọ ihe ngosi nka nke ọgbara nka na Turkey.Ihe owuwu ohuru nke Maazi Kumaa mere bu “Denenchofu Seseragikan” nke mepere na Denenchofu Seseragi Park.
Nlele panoramic nke Denenchofu Seseragikan, nke iko kpuchiri kpamkpam ma nwee mmetụta imeghe ⓒKAZNIKI
Echere m na omume ije n'onwe ya nwere ihe ọ pụtara nke ukwuu.
Anurum na Maazị Kuma gara ụlọ akwụkwọ ọta akara / elementrị na Denenchofu.You nwere ebe ncheta ebe a?
"Agara m Denenchofu na ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ elementrị nke ngụkọta nke afọ itoolu. N'oge ahụ, anọghị m naanị n'ụlọ akwụkwọ, kamakwa na-agbagharị n'obodo dị iche iche, ogige ntụrụndụ, n'akụkụ osimiri, wdg. N'ezie, njem ahụ kachasị mma Osimiri Tama E nwere otutu ihe m na-echeta mgbe m bụ nwata na mpaghara a, ọ bụghị naanị ogige ntụrụndụ Tamagawaen dị na saịtị nke ogige Seseragi dị ugbu a, kamakwa ogige Tamagawadai na Katọlik Denenchofu Katọlik nke ka dị. dị ka m na-eto na Osimiri Tama, karịa ịgagharị gburugburu ebe a. "
Kedu ka oru ngo a si di na ebe ncheta?
"Echere m na ọrụ a n'onwe ya na-adọrọ mmasị. Echere m banyere ogige na ihe owuwu dị ka otu. Ọ bụghị naanị ije nke bụ ọba akwụkwọ / nzukọ nzukọ ... Echiche na ọ bụ ogige nwere ọrụ nke ọbá akwụkwọ / nzukọ N'ihe owuwu ọha, ihe owuwu ahụ n'onwe ya nwere ọrụ, mana echiche Maazi Ota Ward bụ na ogige ahụ nwere ọrụ. Maazị Ota-ku nwere nnukwu echiche, yabụ achọrọ m isonye. "
Ihe okike nke ulo ohuru, Seseragikan, ga agbanwe ihe o putara na oru nke ebe na ebe.
"Ejikọtara Seseragikan na ọnụ ọnụ ugwu n'akụkụ osimiri a na-akpọ ahịhịa (akara ugwu) n'ihu nke a. Enwere uzo dị n'okpuru ahịhịa ahụ, na enwere ohere ebe ị nwere ike ịgagharị. N'oge a," Seseragikan "bụ Echere m na mmụba nke ndị nọ n'ogige ahụ na mpaghara a ga-agbanwe n'ihi nke a, na ịme ije n'onwe ya ga-enwe ọgaranya karịa karịa na mbụ. "
Site na nguzobe nke Seseragikan, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ọtụtụ mmadụ ga-achọ ịbanye.
"Echere m na ọ ga-abawanye. Echere m na omume ije na omume nke ịnụ ụtọ ebe a ga-arụ ọrụ dị ka otu. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọha na eze na ụzọ mpaghara ahụ kwesịrị ịdị obere. na ụdị ọhụụ dị ka nke ahụ, nke ụlọ ọha na-agbanwe agbanwe ọnụọgụ ndị mmadụ na mpaghara ahụ, nwere ike ịmụrụ ebe a. "
Mmetụta dị ka ịnọ ọdụ na sofa n'ime ụlọ
Biko gwa anyi gbasara isi okwu na echiche gi bu ihe owuwu a.
Nke mbu, biko gwaa anyi banyere "veranda of the forest".
"Ihe owuwu ụzọ mbata ahụ dị ọkara nke etiti oke ọhịa na ihe owuwu ahụ. Echere m na ndị Japan maara n'otu oge na mpaghara etiti ahụ bụ nke kacha baa ọgaranya na nke na-atọ ụtọ. Na narị afọ nke 20, oghere ụzọ mbata ahụ kwụsịrị kpamkpam. Thelọ ahụ abụrụla igbe mechiri emechi. mmekọrịta dị n'etiti ụlọ na ogige ahụ apụla n'anya. Nke ahụ na-eme m owu na-ama m, echekwara m na ọ bụ nnukwu mfu nye omenaala ndị Japan. "
Ọ bụ ihe ọ ofụ nke iji ihe dị n'ime na n'èzí na-eme ihe?
"Nke ahụ ziri ezi. Ọ dabara nke ọma, m tolitere n'ụlọ nwere ihe owuwu ụzọ mbata, ya mere na-agụ akwụkwọ na veranda, na-egwu egwuregwu na ihe owuwu ụzọ mbata, na-ewu ụlọ na ihe owuwu ụzọ mbata, wdg. Echere m na ọ bụrụ na anyị nwere ike nwetaghachi ihe owuwu ụzọ mbata ọzọ, oyiyi obodo Japan ga-agbanwe nke ukwuu. N'oge a, agbalịrị m ịkọwa nke onwe m banyere nsogbu a na akụkọ ihe mere eme nke ụkpụrụ ụlọ. "
Porzọ mbata ahụ bụ ebe ejikọrọ na okike, ya mere ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịme mmemme n'oge.
"Enwere m olile anya na ụdị ihe ahụ ga - apụta. Enwere m olile anya na ndị na - eji ya ga - ewepụta atụmatụ karịa ka ndị na - emepụta ya na gọọmentị chere."
Kengo Kuma na “Seseragi Bunko” n’elu ala izu ike 1 ⓒ KAZNIKI
Nwere ike ịgwa anyị gbasara "nchịkọta akwa chara acha nke na-abanye n'ime ọhịa".
"Buildinglọ a abụghị obere ụlọ, o nwekwara nnukwu olu. Ọ bụrụ na i gosipụta ya otu o siri dị, ọ ga-ebu oke oke ma itule ya na ọhịa agaghị adị njọ. Ya mere, e kewara elu ụlọ ahụ n'ọtụtụ Echere m ụdị dị ka nke a, echere m na ọ na-adị ka ọ na-agbaze na gburugburu ebe obibi.
N'ụlọ nzukọ na-atamu ntamu庇(akuku)Ugo na-ehulata ala n’ohia.Ihe owuwu na-asọpụrụ ihe okike (ọchị). "
Ulo warara na-emepụta ụdị ịdị elu n'ime oghere ime.
"N'ime ime ụlọ, elu ụlọ dị elu ma ọ bụ dị ala, ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ, o yiri ka oghere dị n'ime ahụ na-apụ apụ n'èzí. A na-eke ọtụtụ ebe dị otú ahụ. Nke ahụ bụ otu ebe elongated n'ozuzu ya. N'ime, ị ga-ahụrịrị ụdị ohere dị iche iche n'ezie. Echere m na ọ dị iche na ụdị ọdịdị nke igbe igbe dị mfe. "
Biko gwa anyi banyere “ime ulo n’ime obodo juputara na mma oku”.Say na-ekwu na ị kachasị banyere osisi.
"Oge a, a na m eji osisi eji egbu osisi n'etiti osisi. Achọrọ m ka ndị ọrụ niile jiri ya dịka ọnụ ụlọ nke ha. Echeghị m na e nwere ọtụtụ ime ụlọ mara mma nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ((Laughs). , Achọrọ m idobe mmetụta izu ike nke ime ụlọ ahụ. Ọ dị ka ime ụlọ ebe ị nwere ike ịnụ mkpọda nke elu ụlọ dị ka ọ dị, ọ bụghị na nke a na-akpọ ụlọ ọha na eze yiri igbe. Enwere m olileanya na m nwere ike ịgụ akwụkwọ nwayọ nwayọ n'ebe mara mma, soro ndị enyi m kwurịtara okwu, bịarute ebe a mgbe ike gwụrụ m, wee nwee ahụ ike dị ka ịnọdụ ala na sofa n'ime ụlọ.
Maka ebumnuche ahụ, obere ihe ochie ochie ma dị jụụ dị mma.Ọtụtụ afọ gara aga, mgbe m bụ nwata, e wuru ụlọ ọhụrụ na Denenchofu.Agara m na-eleta ụlọ ndị enyi dị iche iche, mana mgbe ụlọ niile ndị tọrọ ọhụrụ na ndị nke gafere oge mara mma nke ukwuu. "
Enwere m olile anya na ị ga-ahụ Denenchofu dị ka obodo.
Echere m na ụlọ ọrụ onye nkụzi gị nwere isiokwu nke ibikọ ọnụ na okike, mana enwere ọdịiche dị n’etiti ije na ime obodo na okike n’ime obodo mepere emepe dịka Denenchofu?
"N'ezie, amalitere m iche na obodo na ime obodo adịghị iche. N'oge gara aga, a na-eche na nnukwu obodo dị iche na nke ime obodo. Denenchofu bụ ebe ama ama ama na Japan. Ma, na Echiche, Echere m na ọ bụ nnukwu ime obodo.Egwuregwu Tokyo bụ na ọ dị ka mkpokọta obodo nwere ụdị mmadụ dị iche iche, isi mmalite nke obodo Edo bụ mpaghara dị mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ị gafee otu ụzọ ma ọ bụ obere ugwu, ọdịbendị dị iche dị n'akụkụ gị.Echere m na ụdị dị iche iche bụ amara Tokyo dị iche iche na mpaghara ime obodo a, dịka obodo ma ọ bụ obodo nta. Na Seseragikan, ị nwere ike ịnụ ụtọ mpaghara ime obodo dị ka obodo. Enwere m olile anya na ị ga-anụ ya.
Amụrụ na 1954.Emechara Ngalaba Nhazi ụlọ, Mahadum Tokyo. 1990 guzosie ike Kengo Kuma & Associates Architects and Urban Design Office.Mgbe ọ rụsịrị ọrụ dị ka prọfesọ na Mahadum Tokyo, ọ bụ ugbu a prọfesọ pụrụ iche na prọfesọ a na-ahụ anya na Mahadum Tokyo.
Akpata oyi wụrụ m na Kenzo Tange's Yoyogi ime ụlọ egwuregwu m hụrụ na Olympics nke Tokyo na 1964, na m na-ezube-abụ-atụpụta ụkpụrụ ụlọ site na nwata.Na mahadum, ọ gụrụ akwụkwọ n'okpuru Hiroshi Hara na Yoshichika Uchida, na mgbe ọ bụ nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, ọ gafere Ọzara Sahara n'Africa, nyochaa obodo, ma lekwasị anya na ịma mma na ike nke obodo.Mgbe ọ rụchara ọrụ dị ka onye nyocha na-eleta na Mahadum Columbia, ọ guzobere Kengo Kuma & Associates na 1990.Ọ haziri ihe owuwu ihe karịrị mba 20 ((lọ Ọrụ Architectural nke Japan Award, International Wood Architecture Award si Finland, International Stone Architecture Award si ,tali, wdg) ma nata akara dị iche iche n'ụlọ na ná mba ọzọ.Ebumnuche maka ije nke jikọtara na gburugburu ebe obibi na ọdịbendị, anyị na-atụ aro atụmatụ mmadụ, nke dị nro ma dịkwa nro.Na mgbakwunye, site na nchọta maka ihe ọhụrụ iji dochie ihe na igwe, anyị na-agbaso ụdị ụlọ dị mma maka ọha mmadụ mepere emepe.
Lee m anya!
Eprel 4th (Sat) ruo 17th (Sun)
Daysbọchị izu 13: 00-18: 00 (Mepee na ụbọchị izu 18: 00-20: 00 ma ọ bụrụ na emere ndokwa tupu oge)
Satọde na Sọnde 11: 00-18: 00
Holidaybọchị ezumike: Wenezde
Bọchị ụlọ oriri na ọurantụurantụ
5rd Saturday na Mee na Nọvemba kwa afọ
Plọ ahịa Sticka
leta / ọlaọcha / rịbọn
Eprel 6th (Sat) ruo 12th (Sun)
Daysbọchị izu 13: 00-18: 00 (Mepee na ụbọchị izu 18: 00-20: 0 ma ọ bụrụ na emere ndokwa tupu oge)